आर्यन र प्रियंकाको जोडीले तान्ला दर्शक ? « Ramailo छ
आर्यन र प्रियंकाको जोडीले तान्ला दर्शक ?
समय : 12:05 pm
यो शुक्रबार हलमा नयाँ जोडीको फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछ । नायक आर्यन अधिकारी र नायिका प्रियंका कार्कीले पहिलो पटक स्क्रिन सेयर गरेको फिल्म ‘बटरफ्लाई’ दर्शकका लागि नयाँ फिल्म हो । यो नयाँ जोडीले दर्शकलाई हलमा कत्तिको आकर्षक गर्ला त ?
आफ्नो जोडीलाई दर्शकको साथ मिल्नेमा आर्यन र प्रियंका विश्वस्त छन् । ‘फिल्मको गीत र प्रोमोलाई मन पराउनु भएको छ । यसैले पनि दर्शक हलसम्म आउँनु हुन्छ भन्ने लाग्छ’, दुवै भन्छन्, ‘फिल्म पनि राम्रो बनेको छ ।’ फिल्मको कथा पाल्पामा रहेको रानी महलसँग जोडिएको छ । ओम गुरुङ प्रतिक निर्देशित फिल्ममा आर्यन र प्रियंकासँगै अभिनेता अर्पण थापाको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ । आर्यन र प्रियंकासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :